Posted on November 12, 2011 by cuttiepinkgold	Standard
Absolutely right ! Agree with you chit . ဘယ်သူမှ အမှားနဲ့ မကင်းကြပါဘူး။ အဓိက နားလည်မှုနဲ့ ချစ်ခင်မှုပါပဲ။ ပြင်မရတဲ့ အရာဆိုတာမရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး လူဆိုတာ ကိုယ်ခံရတာရော၊ သူများကို လုပ်မိရင်ရော ဘယ်ခံစားချက်ကမှ ကောင်းမယ်မထင်မိဘူး။ နားလည်မှုရှိရင် ချစ်တဲ့ မျက်စိနဲ့မြင်မိကြမှာပါပဲ။ နားလည်မှု လွဲခဲ့ကြရင်တောင် ချစ်ခင်မှုကို အခြေခံထားရင် အငြိုးအတေးဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတော့ နင့်ကို အမြဲချစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ကြီးပင့် နင်ဟာ ငါ့ရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းထဲက တစ်ယောက်ပါပဲ…😉 နင်ပြောသလို .. ” ကိုယ့်ကိုကိုယ် လေးစားသလို ၊ ကျွန်မတို့ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လေးစားတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းလေးကို ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးကို ဖန်တီးကြရအောင်လား ..”🙂